काठमाडौँ । कुनै पनि महामारी वा विषम स्थितिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग नै हुने गर्छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तको
काठमाडौँ – नेपाली काँगे्रसका नेता डा मीनेन्द्र रिजाल यस पटक निकै चर्चामा हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी भइरहेका बेला उहाँले भारतसँंगको सम्बन्धलाई लिएर कांगे्रसलाई मात्र
काठमाडौं । विश्वका शक्तिशाली मुलुकलाई समेत हल्लाइरहेको कोरोना भाइरसको स,ङ्क्रमणको रो,कथाम, नि,यन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा पनि सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट उच्च प्राथमिकताका काम भइरहेका छन् । सरकारले रो,कथामकै लागि
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले आफुलाई कुनै पदको लो,भ नभएको जि,किर गरेका छन् । क्यानाडा नेपाल संगको कुराकानीमा नेता भिम रावलले भने, “मैले कहिल्यै पनि सरकारको वि,रोध
ज्ञानेन्द्र शाहीको टोलीले का,नेखुशी गर्न थालेप,श्चात पछि ह,टें – अब कहिल्यै सहकार्य हुन सक्दैन – पूर्वडिआईजी खरेल
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व-डिआईजी एवं सामजिक अ,भियन्ता रमेश खरेलले देशमा सुशासन र विधिको शासन नभएकाले ‘हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान’को घोषणा गर्नुपरेको बताएका छन्। क्यानाडा नेपालमार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रम राष्ट्रको
राजसंस्था फा,लेर देशले के पायो ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले राजसंस्था फर्काउनुपर्ने बताएका छन्। क्यानडा नेपालमार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रम राष्ट्रको सवालमा गरिएको अन्तर्वार्तामा लिङ्देनले राजसंस्थाको विषयमा वकालत गरेका हुन्।
मास्क नलाए पनि कोरोनाबाट स,तर्क छिन कोमल वली, गोजीमा जे बोकेर हिड्छिन – हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौ । कोरोना भा,इरसका कारण नेपालीहरु सतर्क हुन थालेका छन् । मुखमा मास्क लाएर हिड्ने देखि सार्वजनिक कार्यक्रममा कमै जान समेत थालेका छन् । यहि विषयमा राष्ट्रियसभाकी सदस्य कोमल वलीले
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलोपटक मि,र्गौला दान गरेकी अन्जानको खु,लासा – भान्जीलाई पनि मैले नै म,नाएको हुँ (भिडियो सहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटक मिर्गौला प्र,त्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । आफ्नी भान्जी समिक्षाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कि,ड्नी दा,न गरेकी हुन् । बुधबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट
अक्षरको गिटी कु,ट्दै हिडिरहेको मान्छे हुँ म – विप्लव ढकाल
काठमाण्डौं । आफूलाई अक्षरको गिटी कु,ट्दै हिडिरहेको मान्छे बताऊने साहित्यको उर्भर भूमि भोजपुर जिल्लाको तत्कालिन याकु गा.वि.स. मा ज,न्मनुभएका कवि विप्लव ढकालका हिउँको यात्रा, चि.ताको ज्वा.ला, अन्तिम नायिका, कालो मध्यान्तर,
प्रधानमन्त्री ओलीको पद जो,खिममा छैन – सुवास नेम्वाङ
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच देखिएको वि,वाद र श,क्ति सं,घर्षले प्रधानमन्त्रीको पद जो,खिममा नरहेको उल्लेख गरेका छन् । नेम्वाङले क्यानाडा